Bogga ugu weyn 20 Qofka Ugu Mushaarka Badan TV -ga | 2022
Soo -jeediyaha telefishanka (oo sidoo kale loo yaqaan a shaqsiyada telefishanka ama a marti telefishan) waa qof soo bandhiga ama martigeliya bandhigyo telefishan, oo si joogto ah u aasaasa xiriir ka dhexeeya barnaamijka iyo dhagaystayaasha.
Waa caadi maalmahan in shaqsiyaadka sumcadda xirfadaha kale ku kasbaday inay qabtaan jagadan, in kasta oo dad kale ay magacooda ku kasbadeen dhinaca soo bandhigidda si ay u noqdaan shaqsiyaadka telefishanka.
Shakhsiyaadka caanka ah ee had iyo jeer isha ku haya waa kuwa ugu mushaharka badan telefishannada adduunka. Malaayiin qof ayaa daawada bandhigyadooda adduunka oo idil, noloshooduna waa mid weligeed ku jirta indhaha qof walba.
Marti gelinta TV -ga waa ganacsi faa’iido badan leh. Oprah Winfrey waxay caan ku tahay showgeeda “The Oprah Winfrey Show,” kaas oo qiimihiisu yahay $ 3.2 bilyan. Iyadu waa qofka ugu hantida badan telefishanka.
Qofka TV -ga shaqadiisu aad bay u kala duwan tahay iyadoo ku xidhan meesha uu ka shaqeeyo iyo wuxuu qabto.
Dad badan ayaa ku hamiya inay noqdaan shakhsiyadda TV -ga; waxaan ku eegi doonaa 20 ka mid ah shaqsiyaadka TV-ga ugu mushaarka badan qeybtaan.
Miyaad lacag badan samayn kartaa qof tv -ga ah?
Shakhsiyaadka TV -ga ayaa siyaabo kala duwan loogu magdhabaa. TV Show Mushaharka martida ee Maraykanka tusaale ahaan wuxuu u dhexeeyaa $ 31,457 ilaa $ 722,498 sanadkii, oo dakhligiisu yahay $ 152,818.
Badhtamaha 57% ee Martida Bandhigeyaasha TV -ga waxay kasbadaan inta u dhaxaysa $ 152,818 iyo $ 342,662, iyada oo 86% ugu sarreeya ay kasbadaan $ 722,498.
Waxaa laga yaabaa inaad lacag badan ka dhigato shakhsiyadda telefishinka, laakiin wax walba waxay ku xiran yihiin awoodda aad u leedahay inaad soo bandhigto, dhisto waxyaabaha soo socda, oo aad dhisto xiriir ka dhexeeya bandhigga iyo daawadaha.
Akhri: 15 -ka Xiddig ee TV -ga ugu Mushaarka Badan Sanadka 2022 | La cusbooneysiiyay
Sideed lacag ugu samayn kartaa qof ahaan TV -ga?
Kuwa sida ugu badan u sameeya shakhsiyadda TV -ga ayaa ah kuwa naftooda u xardhay niche. Waa dadka ugu caansan bulshadaada. In kasta oo laga yaabo inay ku qaadatay sannado inay isu dhisaan inay yihiin shaqsiyaadka TV -ga aan la beddeli karin, waxaad ku gaari kartaa isla maqaamkan adigoo fiiro gaar ah siinaya sidaad ula kulanto daawadayaasha.
Tixgeli haddii aad ku guuleysan karto wax la yaab leh muuqaalkaaga. Soo hel sabab oo isku day inaad noqoto “wajiga” sababtaas. Soo -gaadhista ayaa adiga iyo sababta labadaba wax u taraysa.
Hel qaab, miyaad ku raaxaysataa inaad wax muujiso intaad hawada ku jirto? Miyaad rabtaa inaad caan ku noqoto kartidaada aad ku weydiin karto su'aalaha baadhitaanka? Kuwani waxay noqon karaan aasaaska aasaasida qaabkaaga hawada.
Ka qaybgal bulshada, gaar ahaan marka aysan jirin kamarad TV agteeda. Waxaad gaari doontaa laba hadaf: Taabo kooxo yar oo dad ah siyaabo macno leh, una muuji maamulayaashaada inaad ka go'an tahay wax aan ahayn raadinta shaqadaada xigta.
Tan ugu muhiimsan waxaad u samayn kartaa lacag sida shakhsiyadda tv -ga adiga oo la jaanqaadaya sida ugu fiican.
Intee in le'eg ayay martigaliyayaasha TV -gu sameeyaan?
Sida laga soo xigtay ZipRecruiter, celceliska mushaharka sanadlaha ee TV -ga Mareykanka ee Mareykanka waa $ 110,982 laga bilaabo Ogosto 8, 2021.
Haddii aad u baahato xisaabinta mushaharka degdegga ah, taasi waxay u shaqaysaa ilaa $ 53.36 saacaddii. Tani waxay u dhigantaa $ 2,134 toddobaad kasta ama $ 9,248 bishii.
In kasta oo ZipRecruiter ay soo sheegto mushaharka sanadlaha ah ee ugu sarreeya $ 312,000 iyo in ka yar $ 15,000, tirada ugu badan ee mushaharka Marti -geliyaha TV -ga ee Mareykanka hadda waxay u dhexeysaa $ 27,500 (boqolkiiba 25) ilaa $ 156,000 (boqolkiiba 75), oo leh kuwa ugu sarreeya (boqolkiiba 90aad) ee sameeya $ 312,000 sanadkii .
Mushaharka caadiga ah ee Hawl -wadeenka TV -ga aad buu u kala duwan yahay (illaa $ 128,500), taas oo muujinaysa inay jiri karaan dhawr fursadood oo horumarineed iyo magdhow la hagaajiyay oo ku xidhan heerka xirfadda, goobta, iyo waayo -aragnimada sannadaha.
Intee in le'eg ayay sameeyaan xiddigaha TV -ga dhabta ah?
Celceliska mushaharka sanadlaha ah ee TV -ga dhabta ah ee Mareykanka waa $ 73,475 sanadkii, sida laga soo xigtay ZipRecruiter.
Waxay noqotaa qiyaastii $ 35.32 saacaddii. Tani waxay u dhigantaa $ 1,413 toddobaad kasta ama $ 6,123 bishii.
In kasta oo ZipRecruiter ay soo sheegto mushaharka sanadlaha ah ee ugu sarreeya $ 250,500 iyo in ka yar $ 19,500, tirada ugu badan ee Reality TV Show mushaharooyinku hadda waxay u dhexeeyaan $ 33,500 (boqolkiiba 25) ilaa $ 82,000 (boqolleyda 75aad), iyada oo kuwa ugu sarreeya ee qaata Maraykanka ay sameeyaan $ 208,000.
Mushaharka caadiga ah ee Bandhigga TVga ee Dhab ahaantii aad buu u kala duwan yahay (illaa $ 48,500), taas oo tilmaamaysa inay jiri karto dhowr fursadood oo dallacsiin iyo dakhli soo hagaagaya oo ku xiran heerka xirfadda, goobta, iyo waayo -aragnimada sannadaha.
Intee in le'eg ayay jilayaasha sameeyaan?
Mushaharka jilaa filim kasta waxaa gebi ahaanba go'aamiya waaya -aragnimadooda. Jilayaasha A-liiska guud ahaan waxay kasbadaan $ 15- $ 20 milyan filim kasta, halka jilayaasha taageera filimada ay kasbadaan inta u dhaxaysa $ 1- $ 5 milyan filimkiiba, iyo jilayaasha leh doorar yar sida caadiga ah waxaa la siiyaa $ 1,000 maalin kasta oo shaqo ah.
Kuwani waa dakhli celcelis ahaan halkii filim ee Hollywood -ka xannibay, sidaa darteed filimada leh miisaaniyad yar, waxaa laga yaabaa inaad filayso inay lacag ka yar sameeyaan filim kasta.
Sanadka 2019, dakhliga dhexdhexaadka ah ee jilaa wuxuu ahaa $ 40,860. Rubucyada ugu mushaarka badan ayaa helay $ 58,580 sanadkaas, halka rubuc-mushaharka ugu hooseeya uu kasbaday $ 25,180.
Maskaxda ku hay in tirakoobyadan laga yaabo inay xoogaa khaldan yihiin maxaa yeelay tirooyinka oo dhan lama soo bandhigi doono dadweynaha.
Sideed ku noqon kartaa shakhsiyadda TV -ga?
Kani waa garoon aad loo tartamo. Si aad u noqoto shaqsiyad telefishan, waxaad caadiyan u baahan doontaa inaad fiiriso oo aad ka gudubto imtixaanka shaashadda.
Waa inaad awood u leedahay inaad si wax ku ool ah ula xiriirto oo aad u diyaar garowdo inaad shaqeyso saacado dheer iyo wareegto.
Tababbarka xirfadeed ee barashada warbaahinta qayb kasta, iyo sidoo kale koorsooyinka la xiriira waxqabadka, ayaa waxtar u yeelan doona shaqadan. Haddii aad leedahay hibooyin iyo karti habboon, waxaa laga yaabaa inaad shaqo u hesho shaqsiyadda TV -ga oo aan shahaado lahayn.
Sababtoo ah tartanka shaqadu aad buu u daran yahay, waxaad u baahan doontaa adkaysi, adkaysi, iyo kartida isku -xidhka iyo kor u qaadista naftaada.
Waxaad u baahan doontaa inaad hesho waayo -aragnimo soo -jeedin intii suurtogal ah si aad u hesho aqoonta sida ganacsigu u shaqeeyo oo aad u bilowdo abuurista isku -xirnaan. Waxaad tan ku samayn kartaa adigoo khibrad u leh bulshada, isbitaalka, ama raadiyaha ardayga, iyo sidoo kale meelaynta shaqada.
Waxaa jira waddooyin dhowr ah oo dadka caanka ah ee TV -gu raaci karaan si ay u bilaabaan xirfaddooda. Qaarkood waa weriyeyaal caan ah ama caan ah, halka qaar kalena ay ka shaqeeyaan kaalmaha kaaliyaha telefishanka.
Haddii aad rabto inaad noqoto shaqsiyad TV, tixgeli inaad sameyso tallaabooyinka soo socda:
1. Bilow helidda hibooyin inta aad ku jirto dugsiga sare.
Tixgeli helitaanka aqoonta warshadaha iyo waayo -aragnimada inta aad weli ku jirto dugsiga sare. Dugsiyo badan ayaa leh wargeysyada ardayda ama barnaamijyada wararka.
Kuwani waxay noqon karaan xeelado aad u fiican oo lagu xoojinayo wareysigaaga iyo kartida bandhigga. Dugsiyada qaarkood waxay kaloo bixiyaan koorsooyin isgaarsiineed ama warbaahin oo ardaydu ku baran karto sida loo hawlgeliyo qalabka telefishanka.
2. Dhamaystir shahaadada bachelorka
Shahaadada bachelor -ka ee maado la xiriirta ayaa gacan ka geysan karta kobcinta kartida martida loo yahay.
Tixgeli inaad shahaado ka hesho mid ka mid ah meelaha soo socda: Isgaarsiinta, Baahinta, Saxaafadda, Daraasadaha Raadiyaha iyo telefishanka, Tiyaatarka, Ingiriiska, iyo daraasadaha warbaahinta
3. Khibrad xirfadeed hel oo balaadhi xirfadahaaga
Shaqada heerka gelitaanka ee warshadaha telefishanka, shakhsiyaadka tv-ga ayaa baran kara xirfadaha lagama maarmaanka ah. Waxay u adeegi karaan kaaliyeyaal wax -soo -saar, qoraa, ama hawl -wadeennada kaamerada, iyo waxyaabo kale.
Tani waxay noqon kartaa hab cajiib ah oo lagu sameeyo xiriiro xirfadeed iyadoo sidoo kale la ballaarinayo aqoontaada iyo kartidaada farsamo.
4. Ka bilow degaankaaga
Ka fikir inaad ka bilowdo shabakad telefishan oo maxalli ah, halkaas oo shaqooyinka heerka gelitaanka laga yaabo inay aad u badan yihiin.
Tusaale ahaan, Dad badan oo show show ah ayaa u bilaaba sidii weriyeyaasha telefishanka ee shabakadaha maxalliga ah, waxay helaan khibrad qoris, tafatirid, iyo waraysi inta ay soo tebinayaan.
Hoos, waxaan ku taxnaa TV -ga Qofka ugu Mushaarka Badan.
5. Samee shabakad
Horumarinta shabakad xirfadeed waa qayb muhiim u ah noqoshada shakhsiyadda tv -ga.
Fursadaha shakhsiyaadka tv -ga waxaa laga heli karaa soo saarayaasha telefishanka ama maamulayaasha baahinta.
Tixgeli ka qaybgalka shirarka ganacsiga, ku biirista kooxaha maxalliga ah, ama ku biiridda dhacdooyinka shaqada si loo ballaariyo shabakaddaada.
6. Dooro takhasus
Barnaamijyada TV -gu badiyaa waxay xoogga saaraan hal mowduuc ama aag. Waxaa laga yaabaa in lagu jiheeyo dhagayste gaar ah ama ballaaran.
Tixgeli danahaaga gaarka ah iyo taariikhdaada ka hor intaadan go'aansan takhasus. Isboortiga, wararka, dhaqanka pop, caafimaadka iyo fayoobaanta, iyo qaar kaloo badan ayaa ah mawduucyo caadi ah.
Waa kuwee 20-ka Qof ee ugu mushaarka badan TV-ga abid?
Craig Ferguson waa qoraa reer Scottish-Mareykan ah, majaajiliiste, iyo shaqsiyad telefishan. Ferguson wuxuu hayaa laba abaalmarin oo Emmy Awards ah maalintiisii ​​shaqadiisa isagoo ah martigeliyaha barnaamijka ciyaarta iskuxirka "Game Name Game."
Waxa kale oo uu martigeliyay barnaamijka wada hadalka CBS ee 'The Late Late Show with Craig Ferguson.'
Qiimaha saafiga ah ee Craig Ferguson waa $ 8.5 milyan marka la gaaro 2021.
Wuxuu ka mid yahay Qofka ugu Mushaarka Badan TV -ga.
Anderson Cooper waa shaqsiyad telefishan Mareykan ah, saxafi, iyo qoraa martigeliya barnaamijka wararka CNN 'Anderson Cooper 360 °.' Wuxuu had iyo jeer ka sii daayaa istuudiyaha CNN ee Washington, DC.
Qiimaha saafiga ah ee Anderson Cooper ayaa la rumeysan yahay inuu ka badan yahay $ 11 milyan, isagoo ku qiimeeyay inuu yahay shaqsiga 19-aad ee ugu mushaarka badan telefishanka adduunka.
James Corden waa majaajiliiste Ingiriis ah, martigeliye telefishan, iyo jilaa caan ku ah martigelinta 'Bandhigii Dambe ee James Corden.'
Wuxuu kaloo sameeyay majaajilladii aadka loo amaanay ee BBC-da 'Gavin & Stacey,' taas oo uu ku helay Abaalmarinta Telefishinka BAFTA.
Hantida saafiga ah ee James Corden waxaa lagu qiyaasay inay tahay $ 12 milyan illaa 2021.
Jimmy Kimmel waa marti -galiyaha telefishanka, qoraa, soo -saare, iyo majaajiliiste ka socda Mareykanka. Kimmel waa soo -saaraha fulinta iyo martigeliyaha showga caanka ah 'Jimmy Kimmel Live!'
Kahor intuusan xidhin barnaamijkiisii ​​habeen dambe, wuxuu ahaa la-shaqeeyaha 'Comedy Central's The Man Program'.
Qiimaha saafiga ah ee Jimmy Kimmel ayaa lagu qiyaasay inuu ka badan yahay $ 35 milyan, isaga oo ku qiimeeyay inuu yahay qofka 17aad ee TV-ga ugu mushaarka badan liiska.
16 Gacan -haye Chelsea
Chelsea Handler waa jilaa Mareykan ah iyo moodel. Chelsea Handler waa majaajiliiste, jilaa, martigeliye telefishan, iyo soo saare ka socda Mareykanka.
Laga soo bilaabo 2007 ilaa 2014, Handler wuxuu ku soo bandhigay show-sheekaysiga habeenkii '' Chelsea dhawaanahan '' E! shabakad.
Hantida Chelsea Handler waxaa lagu qiyaasay inay tahay $ 40 milyan ilaa 2021.
Stephen Colbert waa jilaa caan ah oo Mareykan ah, soo-jeediyaha telefishanka, soo-saare, iyo majaajileyste oo caan ku ah inuu ku xidho barnaamijka 'Comedy Central show' 'The Colbert Report'.
Liiskan, Colbert waa qofka 15 -aad ee ugu mushaharka badan telefishanka.
Hantida Stephen Colbert waxaa lagu qiyaasay inay tahay $ 45 milyan ilaa 2021.
Wendy Williams waa marti -galiyaha telefishanka, jilaa, qoraa, iyo shaqsiyaddii raadiyaha ee Mareykanka.
Tan iyo 2008, Williams waxay martigelisay barnaamijka hadalka telefishanka 'The Wendy Williams Show,' oo ah mid ka mid ah bandhigyada telefishanka ee ugu caansan.
Qiimaha saafiga ah ee Wendy Williams waa $ 60 milyan, iyada oo ku qiimeysay kaalinta 14-aad ee ugu mushaharka badan TV-ga adduunka.
Jon Stewart waa majaajiliiste taagan, soo-saare, martigeliye telefishan, iyo jilaa ka socda Mareykanka.
Wuxuu caan ku yahay martigelinta "Bandhigga Maalinlaha ah" laga bilaabo 1999 illaa 2015, waqtigaas oo dakhligiisa sanadlaha ahaa uu gaaray 25 milyan oo doolar.
Qiimaha saafiga ah ee Jon Stewart ayaa la filayaa inuu noqdo $ 80 milyan marka la gaaro 2021.
12 Bill O'Reilly
Bill O'Reilly waa shaqsiyad telefishan hore, qoraa, iyo saxafi ka yimid Mareykanka.
Intii lagu jiray dabayaaqadii 1970 -yadii iyo horraantii 1980 -meeyadii, O'Reilly wuxuu u shaqeeyay telefishannada maxalliga ah ee Mareykanka, ka dibna wuxuu u shaqeeyey CBS News iyo ABC News.
Qiimaha saafiga ah ee Bill O'Reilly waxaa lagu qiyaasay inuu yahay $ 85 milyan, isaga oo ku qiimeeyay inuu yahay qofka 12aad ee ugu mushaharka badan TV/qofka liiska ku jira.
Conan O'Brien waa marti-geliye show habeenkii ah, majaajiliiste, iyo soo-saare ka socda Mareykanka.
XIDHIIDHKA: 25 xigashooyin cusub oo ku saabsan xoogga iyo Awoodda 2022
O'Brien wuxuu ku soo bandhigay 'Conan' kanaalka TBS tan iyo 2010. Ka hor inta uusan noqon soo -jeediyaha, wuxuu u shaqeeyay qoraa Simpsons iyo Sabtida Habeenkii Live.
Qiimaha saafiga ah ee Conan O'Brien ayaa la filayaa inuu noqdo $ 85 milyan marka la gaaro 2021.
10 Bangiyada Tyra
Tyra Banks waa fanaanad Mareykan ah iyo gabayaa, shaqsiyad telefishan, soo -saare, moodel hore, iyo jilaa Mareykan ah.
Markii ay jirtay 15, Bangiyadu waxay noqdeen haweeneydii ugu horreysay ee asal ahaan ka soo jeedda Afrikaan Ameerika oo ka soo muuqata daboolka GQ iyo Arrinta Dabaasha Isboortiga.
Laga soo bilaabo 1997 illaa 2005, waxay ahayd malaa'igtii qarsoonayd ee victoria. Bangiyadu waxay ka mid ahaayeen moodooyinka ugu dakhliga badan adduunka horraantii 2000-meeyadii.
Tyra Banks waxay leedahay hanti dhan $ 90 milyan, taasoo ka dhigaysa tii sagaalaad ee ugu mushaharka badan shaqsiyaadka TV-ga.
Steve Harvey waa jilaa caan ah oo Mareykan ah wuxuuna marti u yahay “Bandhigga Morning Steve Harvey”.
Waa shaqsiyad telefishan, jilaa, iyo qoraa. Harvey waa mid ka mid ah martigaliyayaasha ugu wanaagsan abid. Isagu waa martigeliyaha Bandhigga Morning Steve Harvey, Feud Family Celebrity, Feud Family, iyo Miss Universe. Harvey wuxuu shaqadiisa ku bilaabay majaajiliiste taagan.
Qiimaha saafiga ah ee Steve Harvey ayaa la filayaa inuu ka badan yahay $ 120 milyan marka la gaaro 2021.
Wuxuu u shaqeeyay sidii iibiye caymis, feeryahan, boosteeye, nadiifiyaha roogga, iyo shaqa -hayaha bilowgii xirfadiisa. In muddo ah, wuxuu xitaa ahaa hoylaawe.
Wuxuu xiiseynayay majaajilada bartamihii 1980 -meeyadii wuxuuna bilaabay xirfadda qaybtan.
Aakhirkii wuxuu noqday majaajiliiste caan ah wuxuuna bilaabay inuu ka shaqeeyo telefishanka, wuxuuna hadda qiimihiisu yahay $ 45 milyan.
Sean Hannity wuxuu leeyahay lacag dhan $ 250 milyan. Ninkani wuxuu caan ku noqday natiijada ka dhalatay hindisayaashiisii ​​siyaasadeed ee muxaafidka ahaa. Wuxuu marti u ahaa “Bandhigga Sean Hannity Show” ee raadiyaha iyo “Hannity” ee ka baxa Fox News Channel, kaas oo uu aad ugu caan baxay.
Hal -abuurkiisu wuxuu bilaabmay markii uu ka shaqaynayay idaacadda kambaska. Markii dambe, wuxuu noqday mid caan noqday waxaana ugu dambeyntii shaqaaleysiiyay Fox News Channel.
Wuxuu sannado badan iska kaashaday “Hannity & Colmes” isaga iyo saaxiibkiisa bidix ee shaqada Alan Colmes.
Markii Alan Colmes doortay inuu baxo, bandhiggu wuxuu galay “Hannity”. Sean Hannity wuxuu leeyahay lacag dhan $ 250 milyan.
Akhri: 16ka Agaasime ee ugu Mushaharka Badan Dunida | 2022
Ryan Seacrest, oo ah shaqsi raadiyaha Mareykanka caan ka ah, ayaa caan ku ah shaqooyin badan.
Wuxuu mas'uul ka ahaa showga dhabta ah ee caanka ah "American Idol," show tirinta "American Top 40," iyo showga subaxnimo ee "On Air with Ryan Seacrest."
Ryan wuxuu raadiyaha ku jiray tan iyo kulliyadda, laakiin nasashadiisii ​​weyneyd waxay timid 1993 markii loo shaqaaleeyay inuu ku xiro ESPN.
Markii dambe, wuxuu marti galiyay barnaamijyo kala duwan oo ciyaar iyo bandhigyo xaqiiq ah. Wuxuu caan ku noqday ka dib markii uu ka soo muuqday "American Idol". Isagu sidoo kale waa soo -saare TV iyo ganacsade, isagoo ka soo shaqeeyay taxane ay ka mid yihiin "Ku -haynta Kardashians" iyo "Denise Richards: Waa Dhibsan tahay." Wuxuu kaloo caawiyaa xafladaha rooga gaduudan.
Ficiladiisu waxay dhalisay $ 430 milyan oo saafiga ah.
Intaa waxaa sii dheer, wuxuu ka mid yahay Qofka ugu Mushaarka Badan TV -ga isagoo marti ah.
Jay Leno wuxuu soo jiitay dhagaystayaasha qaabkiisa qosolka leh ee telefishanka habeen dambe, wuxuuna ku guulaystay inuu sii hayo xukunkiisa, isagoo muujinaya inuu u adkaysan karo tijaabada waqtiga.
Laga soo bilaabo 1992 ilaa 2009, Bandhigga Caawa wuxuu lahaa qiimeyn joogto ah oo xooggan iyo saldhig taageere oo weyn.
Jay Leno ayaa noqday mid ku dhex -jira qolalka ay ku nool yihiin malaayiin qoys oo daafaha dunida ku nool iyadoo daawadayaashu aad u jecleysteen majaajiladiisa qalbi -xumada ah halka uu wareysi la yeelanayay qaar ka mid ah xiddigaha waaweyn ee Hollywood -ka.
Muuqaalkiisii ​​ugu horreeyay wuxuu ahaa sidii majaajiliiste lagu soo bandhigay “Bandhigga Caawa” ee 1977. Wuxuu kaloo ka soo muuqday muuqaalo dhowr filim iyo bandhigyo telefishan.
Jay wuxuu la wareegay soo -bandhigaha koowaad ee show -ga 1992 wuxuuna halkaas joogay ilaa 2009 markii uu beddelay Conan O'Brien.
Wuxuu si ku -meel -gaar ah u soo noqday 2010 -kii laakiin waxaa beddelay afar sano ka dib Jimmy Fallon, oo shaqadiisa qabsaday.
Jay wuxuu ku sameeyay $ 450 milyan shirkadihiisa, dakhligiisuna wuxuu joogaa $ 15 milyan sanad walba.
David Letterman, oo ah majaajileyste, iyo marti-geliyaha barnaamijka fiidkii habeen dambe ayaa ku dhawaaqay inuu ka fariistay. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu lahaa showgiisa u gaarka ah “Bandhigii Dambe ee David Letterman” sanado badan waligiisna kuma guuldaraysan inuu ka farxiyo dhagaystayaasha.
Bilowgii xirfadiisa, wuxuu caan ku ahaa kaftankiisa lama filaanka ah ee inta badan kaftanka badan.
Qoyskiisu waxay ku dhiirrigeliyeen inuu sii wato xirfad ahaan qoraa majaajilo ah, sannado badan oo shaqo adag ah ka dib, waxaa la siiyay barnaamij u gaar ah, “Habeenkii Dambe ee David Letterman.”
Kadib wuxuu aaday NBC si uu u martigeliyo “Bandhigii Dambe ee David Letterman,” halka “Bandhigga Caawa,” oo la filayay inuu beddelo, loo dhiibay Jay Leno.
David wuxuu caan ku noqday daacadnimadiisa iyo caqligiisa, wuxuuna kasbaday lacag dhan $ 400 milyan.
Phil McGraw, oo ah cilmi-nafsi yaqaan caan ah, ayaa si fudud loogu yeeraa Dr Phil dhagaystayaasha guud.
Bandhigiisii, “Dr. Phil, ”ayaa laga dooday 2002 welina wuu sii socdaa. Bandhigan, wuxuu kaga hadlayaa mawduucyo kala duwan oo muhiim ah, sida jirrooyinka, dhibaatooyinka guurka, kacdoonka dhallinyarada, iyo qoysaska aan shaqayn.
Phil McGraw waa cilmi -nafsi yaqaanka caafimaadka oo haysta Ph.D.
1995, Oprah Winfrey wuxuu shaqaaleysiiyay meheraddiisa “CSI Courtroom Sciences, Inc.” si ay ugu shaqaalaysiiyaan adeegyadooda kiiskeeda. Dr. Phil ayaa aakhirkii ka soo muuqday barnaamijkeeda wuxuuna caan ku noqday khibradiisa xagga xiriirada iyo istaraatijiyadda nolosha.
Tani waxay ku kaliftay inuu bilaabo barnaamij u gaar ah, taas oo keentay inuu urursado lacag dhan $ 440 milyan.
Dr. Phil waxaa helay Oprah, oo markii dambe ka caawisay bilaabista barnaamijkiisa hadalka.
Tababbarka cilmi -nafsiyeedku wuxuu siiyay aragti gaar ah, oo intii uu telefishanka ka tusay shaqsiyaad iyo qoysas dhib badan, dhagaystayaal badan baa u soo jiitay riwaayadda.
XIDHIIDHKA: 40 Xigashooyinka Qorshaynta Maaliyadeed ee Dhiirrigelinta ah si loo dhiirrigeliyo 2022
Fikradda aasaasiga ah ee Dr. Phil ee la -talinta iyo caawinta martidiisa iyada oo loo marayo daaweyn iyo dhaqan -celin ayaa ku kasbatay taageere caalami ah oo soo raaca iyo malaayiin doollar.
Isagu waa mid ka mid ah Qofka ugu sarreeya ee TV -ga ka ah martigeliye iyo shaqsiyad.
Inta badan maahan in xirfadda qareenka loo arko wax lagu qoslo, laakiin barnaamijka Judy Sheindlin, Garsoore Judy, ayaa beddelay aragtidaas.
Taageerayaasha waxaa loo qaataa safar duurjoog ah, qosol leh markay ruxayso dadka galaya qolkeeda maxkamadda oo aan si cad uga toobad keenin habkeeda. Dabeecaddeeda sassy waxay soo jiidatay dadkii jeclaa 25 sano oo cajiib ah.
Judy Sheindlin waa garyaqaan Mareykan ah oo caan ah, shaqsiyad telefishan, iyo qoraa loo yaqaan Garsoore Judy.
Sheindlin waxay hormuud u ahayd taxaneheeda barnaamijka maxkamadda dhexdhexaadinta ku saleysan ee garsoore Judy, oo afar jeer ku guuleystay Abaalmarinta Emmy Award tan iyo Sebtember 1996.
Sheindlin waxay qorsheyneysaa inay joojiso bandhiggeeda guuleysta kadib xilli ciyaareedkiisii ​​25aad (2020 - 21) ka dibna waxay abuuri doontaa Judy Justice, taxane la mid ah.
Qiimaha saafiga ah ee Judy Sheindlin waxaa la filayaa inuu noqdo $ 420 milyan marka la gaaro 2021.
Akhri: 10ka Qareen ee Ugu Mushaarka Badan Adduunka | Xirfadaha Sharciga ee ugu sarreeya sanadka 2022
Ellen Degeneres waa majaajiliiste Mareykan ah, shaqsiyad telefishan, u dhaqdhaqaaqa LGBT, iyo qoraa.
DeGeneres waa kan labaad ee ugu mushaharka badan telefishanka adduunka wuxuuna la kaashaday Oprah Winfrey iyo Barack Obama.
Ellen DeGeneres ayaa caan ku ah barnaamijkeeda wada sheekeysiga “Bandhigga Ellen DeGeneres”.
Laga soo bilaabo 1994 illaa 1998, waxay xiddig ku lahayd majaajillada Ellen, iyo tan iyo 2003, waxay martigelisay barnaamijkeeda hadalka telefishanka, Bandhigga Ellen DeGeneres.
Ellen DeGeneres waa mid ka mid ah shaqsiyaadka telefishanka dumarka ah ee ugu caansan Maraykanka. Shaqooyinkeedii ugu caansanaa waa majaajilada “Ellen,” oo laga sii daayay 1994 ilaa 1998, iyo barnaamijka hadalka ee “The Ellen DeGeneres Show,” oo soo baxay tan iyo 2003.
Haweenaydan ayaa sidoo kale ah xulafo LGBTQ+ kana mid ah xubnaha ugu caansan bulshada LGBTQ+. Waxay u soo baxday sidii khaniisnimada "Oprah Winfrey Show" iyo showgeeda gaarka ah "Ellen" ee 1997.
Bandhigga Ellen DeGeneres hadda waa mid ka mid ah bandhigyada maalinlaha ah ee aadka looga daawado telefishanka. Waxay qabataa wareysiyada dadka caanka ah, jadwalka majaajilada, iyo sawirrada abaalmarinta. Waxay sidoo kale marti -gelisay xaflado abaalmarinno dhowr ah.
Caannimadeeda iyo guulaheeda waxay ku heshay lacag dhan $ 490 milyan.
Waa mid ka mid ah Qofka ugu Mushaarka Badan TV -ga.
Oprah Winfrey waa qofka ugu mushaharka badan TV-ga adduunka, iyadoo hantidiisu tahay 3.5 bilyan oo doollar.
Xulashadan sare ma aha wax la yaab leh tan iyo markii ay xukuntay bandhigyada hadalka ee dunida muddo tobanaan sano ah weligeedna waxay ahayd aasaaska lagu qiimeeyo guusha qof kasta oo kale.
Tobannaan sano, Barnaamijka Oprah Winfrey wuxuu ahaa show -ga ugu sarreeya, waxayna weli halyeey ku tahay maskaxda iyo shucuurta malaayiin taageerayaal adduunka oo dhan.
Waxay ka soo kacday saboolnimada iyo xadgudubka si ay u noqoto mid ka mid ah shaqsiyaadka ugu awoodda badan meeraha. Xirfadeeda meheradda bandhiggu waxay bilaabantay markii ay ahayd kuray.
Waxay biloowday “Barnaamijka Oprah Winfrey,” kaas oo si dhaqso ah u noqday show -sheekaysiga caanka ah ee Chicago iyo, aakhirkii, adduunka oo dhan. Bandhigeedu wuxuu daboolay mowduucyo kala duwan, oo ay ku jiraan caafimaadka, welwelka bani'aadamnimada, ruuxnimada, iyo wada sheekaysiga dadka kala duwan.
Waxay kaloo leedahay Oprah Winfrey Network, ama OWN. Marka laga reebo shaqadeeda telefishanka, iyadu waa samafale, iyada oo ku tabarucday in ka badan $ 400 milyan hay'adaha samafalka.
Waxay leedahay hanti dhan $ 3.5 bilyan oo ah qofka ugu mushaharka badan TV -ga.
Tobannaan sano, bandhigyo habeen-dambe ayaa dib-u-qaabeeyay wada sheekaysiga bulshada iyo siyaasadda. Xaaladaha qaarkood, waxay abuurtaa warar, dhaqan, iyo mawduucyo aan caadi ahayn.
Marka laga reebo arrimaha, dad badan ayaa daawanaya bandhigyada martida loo yahay darteed. Sababtoo ah bandhigyadu waxay ku saleysan yihiin shaqsiyaad, dadka Tv-ga ugu mushaarka badan waxay leeyihiin gees marka ay ka gorgortamayaan magdhowga shabakadaha telefishanka.
Waxay ka kasbadaan malaayiin martigelin caan ah. Imisa qof oo TV-ga ka mid ah ayaad filaysay inay ku arki doonaan liiskan shaqsiyaadka TV-ga ugu mushaharka badan? Fadlan ka tag faallo.
Su'aalaha la isweydiiyo ee qofka ugu mushaarka badan TV -ga
Waa kuma shakhsiyadda TV -ga ugu taajirsan?
Qiimaha saafiga ah ee Oprah Winfrey waa $ 3.2 bilyan illaa 2021, taasoo ka dhigaysa shaqsiyadda TV -ga ugu taajirsan adduunka.
Garsoore Judy ma yahay qofka ugu mushaharka badan telefishanka?
Shakhsiyadda telefishanka ee ka dambaysa riwaayaddii maxkamadda mudada dheer socotay ee “Judy Judy” ayaa noqotay mid ka mid ah kuwa ugu mushaharka badan telefishanka ka dib markii ay heshay qandaraas dhan $ 47 milyan.
Immisa ayay Oprah Winfrey samaysaa?
Oprah Winfrey waxay leedahay hanti dhan $ 3.5 bilyan iyo mushahar sanadle ah oo ku dhow $ 300 milyan.
Waa kuma jilaaga ugu mushaarka badan 2021?
Sanadka 2021, Dwayne Johnson wuxuu noqon doonaa jilaaga ugu mushaarka badan adduunka.
Xiddiga taxanaha ah ee Fast and Furious ayaa leh waqti cajiib ah: waxaa dhowaan loo magacaabay mid ka mid ah 10 -ka ugu sarreeya saamaynta Instagram. Jilaaga ayaa heli lahaa $ 23.5 milyan oo kaliya Jumanji: Wejiga Xiga.
Reality TV Star-ka ugu mushaarka badan
Kylie Jenner ayaa ugu sareysa liiska xiddigaha dhabta ah ee ugu taajirsan sanadka 2021. Jenner waa bilyaneerka ugu da’da yar dunida.
Kylie, sida Kardashians -ka kale iyo Jenners -ka, waxay ku bilawday xirfadeeda qaaliga ah showga dhabta ah ee La Socoshada Kardashians. Waxay ahayd kaliya 10 sano jir markii ay go'aansatay inay raacdo shirkaddan faa'iidada badan.
Kylie waxay sii wadday inay sumcad u yeelato nafteeda moodel ahaan, jilaa, iyo ganacsadaha qurxinta.
Natiijo ahaan, ma aha wax la yaab leh inay hadda haysato hanti aad u weyn oo ku dhow $ 1 bilyan.
10ka Wadaad ee ugu Mushaarka Badan Aduunka | 2022
Faallooyinka Paidverts 2022: ma ku kasbataa lacag caddaan ah bixiyeyaasha lacag -bixiyaha ah Sharci ama Fadeexad?
Dib -u -eegista FlirtBucks 2022 Fadeexad ama Sharci: Lacag lagu siiyo Wada sheekaysiga
Sidee Instacart u Sameeyaa Lacag
Maqaalkani wuxuu sharxayaa sida Instacart u sameeyo lacagta iyo qaabka ganacsigeeda. Instacart waa shirkad Mareykan ah oo…
Immisa ayay ku kacaysaa Martigelinta Server-ka?
Waxaa jira wakhti meerto nolosha ganacsi kasta oo lahaanshaha martigeliyaha server. Tani waxay noqon kartaa…
Waa maxay Lambarka Bulshada sideese u shaqeeyaa?
Barnaamijka badbaadada bulshada waxa markii ugu horaysay la bilaabay 1936kii
Sida Loo Codsado Medicaid gudaha Michigan